Handray anjara amin’ny fanomanana ny fifidianana rehetra ho avy - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Handray anjara amin’ny fanomanana ny fifidianana rehetra ho avy
Nanao fihaonana teny Betongolo ireo mpikambana ao amin’ny Tanora mbola ho beazina na ny Tambohobe ny sabotsy 27 febroary, nanao jery todika ny taon-dasa sy nibanjina ireo izay hatao mandritra ity taona 2021 ity.
Noho ny fisian’ny coronavirus dia nitsahatra tsy afaka nanao ireo zavatra tokony nataony ny Tambohobe tamin’iny taona lasa iny. Efa fanaon’izy ireo ny fiadiana amin’ny herisetra rehetra. « Mitohy foana ny ady amin’ny herisetra » hoy ireo mpikambana amin’ity fikambanana ity. Be dia be ireo tranga-na herisetra, inona no tokony hataontsika manoloana izany? Mila mifanaraka amin’izay ireo fihetsika hatao, fa tsy sanatria ka mifanohitra amin’izay.
Eo amin’ny fametrahana ireo rantsamangaika eny ifotony ny Tambohobe amin’izao fotoana izao. Tanjona dia mba hisy mpikambana manerana ny fokontany rehetra sy any amin’ny faritra isan-karazany any. Itarina ny fikambanana fa tsy tazonina vala iray, efa misy amin’izao fotoana izao ny fikambanam-behivavy Tambohobe any Toamasina.
Ireo hetsika hatao
Haverina ireo hetsika ara-tsosialy izay tsy tontosa tamin’ny 2020 noho ny hamehana ara-pahasalamana. Eo ihany koa ny fambolen-kazo, ady amin’ny herisetra amin’ny tontolo iainana. Mbola misy ny fanimbana ny tontolo iainana. Anjaran’ny Tambohobe amin’ny fanatsarana izany tontolo iainana izany io fambolen-kazo io.
Mbola ao anatin’ny ady amin’ny corona virus moa isika amin’izao fotoana izao, hanao fanentanana amin’ny ady atao amin’izany ihany koa ity fikambanana ity raha ny nambaran’izy ireo ny sabotsy 27 febroary teo teny Betongolo ihany. Raha ny tanjona dia mba ho salama avokoa isika rehetra, mila miady amin’io aretina io isika, izay nanimba zavatra be dia be teto amin’ny Firenena. Isan’ny zavatra mbola hatao amin’ity taona ity ihany koa ny fiofanana ho an’ireo mpampiofana mikasika ny zon’olombelona mba ahafahan’izy ireo manofana sy manabe ny manodidina azy. Fototra ialana amin’ny herisetra ny fanajana ny zon’olombelona. Rehefa manaja ny zon’olombelona dia foana ho azy herisetra mety hitranga.
Miezaka hatrany ny fikambanana hitady ireo mpiara miasa hanatsarana ny eny amin’ny faritra rehetra eny.
Isany ny voalazan’ireto mpikambana ao amin’ny Tambohobe ireto fa tena herisetra no mahazo ny vahoaka Malagasy amin’izao toe-javatra misy ara-politika izao. Tsy afaka mifamezivezy, voafetra ny lalana azo andehanana, mitombo be tsy araka ny tokony ho izy ny fitohanan’ny fiara, tara fotoana. Tsy fantatra intsony izay toerana hakana taksibe, misy ireo voatery mandeha an-tongotra nefa mitondra enta-mavesatra.
Teo am-pamaranana dia nanambara izy ireo fa handray anjara amin’ny fanomanana ny fifidianana rehetra amin’ny ho avy eto amin’ny Firenena. Tonga marobe ireo mpikambana nanatrika io fihaonana io izay notarihan’ny filohan’ny fikambanana sy ireo rehetra ao amin’ny birao.